मूलधारको राजनीतिमा युवा कहिले स्थापित हुन्छन ? - Darpanpost
» प्रमुख समाचार » विचार » सम्पादकीय अंक: 36383
मूलधारको राजनीतिमा युवा कहिले स्थापित हुन्छन ?
सौरब न्यौपाने शुक्रबार, भाद्र १९, २०७७ मा प्रकाशित
विगतलाई नियालेर हेर्ने हो भने युवा नै हो जो लोकतन्त्र / गणतन्त्र ल्याउन अघि सरेका थिए । अझ सामाजिक कार्यमा भन्ने हो भने युवाहरु नै अग्र स्थानमा छन् तर, हामिले कहिल्यै सोच्दैनौ अझै पनि युवाहरु मूलधारको राजनीतिमा किन उदाउन सकेको छैनन् भनेर ?
वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने युवाहरु सामाजिक काममा धेरै नै अघि छन् । सडकमा भोका रहेका मानिसहरूलाई निशुल्क खाना दिएका छन् । अहिले भै रहेको कोरोना कहरको समय हेर्ने हो भने पनि काठमाडौ देखि पैदल हिडेर आफ्नो घर जाँदै गरेका मानिसहरुलाई ठाँउ ( ठाउँमा खाना पानी र बासको ब्यवस्था गर्न युवाहरु नै अघि छन् । यस्तै सामाजिक कामहरु गरेर युवाहरू उदाहरणीय बन्दै गएका छन् ।
युवाहरुलाई भातृ संगठनभित्र मात्र सिमित राख्दा नसा(नसामा बगेको मुलधारको राजनीतिमा आएर देश बनाउन्छु भन्ने उर्जा उनीहरुले गुमाउँदै गएका छन् । वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने युवा पुस्ता अब मुल धारको राजनीतिमा आएर देश बनाउनु पर्छ भन्ने बहस धेरै चलिरहेको छ । हामीले देशमा भ्रष्टाचार , लुटतन्त्र अत्ति भयो भनी रहदा अब युवालाई मुल धारको राजनीतिमा नल्याई सधै भातृ संगठनमा राख्ने प्रथा पनि अत्ति नै भयो भनेर प्रत्येक राजनीति दलमा यो आवाज उठाउन जरुरी छ ।
जब सम्म युवाले आफ्नो नेतालाई हामी काहा नीर कम्जोर छौं रु जस्ले गर्दा हामीलाई आज सम्म नेतृत्व तहमा राख्न नखोजेको भनेर प्रश्न गर्न जरुरी छ । हामीलाई भातृ संगठनमा मात्र राखी सधै चुनाव जिताउन , भ्रष्टाचारि नेता जेल गए हाम्रो नेतालाई रिहाई गर भन्दै प्रयोग गर्ने हो रु भन्दै जवाफदेही बनाउन जरुरी छ । यदि यसो गरिएन भने युवा पुस्ता कहिल्लै नेतृत्व तहमा पुग्न सक्दैन ।
विभिन्न पार्टीमा रहेका युवाहरूलाई सकारात्मक भएर यति कुरा बुझिदिन मेरो अनुरोध ू यसो गरौँन , तपाई आफ्नो पार्टीको विधान पढ्नु होस् म पनि पढ्ने छु । कहाँ नीर लेखेको रैछ आफ्नो पार्टीको नेताले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रमा सामेल हुँदा त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन हुन्न भनेर ‌नेपालको राजनीतिमा नितिमा हैन , नियतमा खडेरी लागेको छ। त्यसैले त्यो स्वार्थ नियतको, भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रको अन्त्य गर्न हामी युवाहरु सकारात्मक सोच बोकेर अघि बढौँ ।
सात हजार तीन सय ६८ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि, एक सय ४५ जनाको मृत्यु
कोरोना सङ्क्रमणका कारण गुल्मीमा एकैदिन नौ जनाको मृत्यु
शिवराज जेसिसले गर्‍यो उदाहरणीय कार्य
संक्रमित मतदाताले पनि राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने